Philips က SHB9850NC နားကြပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Philips က SHB9850NC နားကြပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ Philips က SHB9850NCs စျေးနှုန်းကဆင်းလာမယ့်လျောက်ပတ်သောကြိုးမဲ့ဆူညံသံ-ပယ်ဖျက်နားကြပ်တစ်ခုကောင်းသောစံနမူနာဖြစ်ကြောင်း. နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကစုံတွဲလွန်ခဲ့တဲ့ညီမျှစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူအစုကုန်ကျစရိတ်လက်တွေ့ကျကျနှစ်ဆရှိသည်မယ်လို့.
နောက်ဆုံးရ Philips က Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့ဆူညံသံ-ပယ်ဖျက်နားကြပ်အမှုအရာတွေအများကြီးပိုင်ခွင့်ရ, ဒါပေမဲ့အနည်းငယ် niggles အားဖြင့်အတားအဆီးဖြစ်စေနေကြတယ်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Philips က SHB9850NC နားကြပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ဘဏ်ခြိုးဖောကျမပါဘဲပယ်ဖျက်ဆူညံသံ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 18 ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Philips ကရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ဆူညံသံ-ပယ်ဖျက် Bluetooth ကိုနားကြပ်ကိုဘဏ်ကိုခြိုးဖောကျမပါဘဲသံဗူးတစ်ပေါ့ပါးတဲ့အစုသို့ပရီမီယံ features တွေအတွက်ထုပ်ပိုးရန်ကြိုးပမ်း.
အကြီးကြပ်မှူးနဲ့တောက်ပ-ရောင်စုံမျိုးဆက် Apple ရဲ့စည်းချက်သံများက kickstarted ထက်အနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အကွာအဝေး Philips က SHB9850NCs ဂန္နားကြပ်ဖို့ပိုကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ဖြစ်ကြောင်း Over-နားကိုနားကြပ်တစ်ခုအတော်လေးသိမ်မွေ့အစုံရှိပါတယ်.
အဆိုပါ SHB9850NC နားကြပ်ကိုတက်ခေါက်သို့မဟုတ်အိတ်သို့သူတို့ကိုငါ fit ကိုကူညီပြားချပ်ချပ်ချနိုင်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်းခွက်နားပေမယ့်အခြားသူအများကြီးမ, တစ်ပါးလွှာပေမယ့်အဆင်ပြေထိပ်ဆုံးတီးဝိုင်းမှပူးတွဲပါနှင့်ကောင်းစွာ, ကူနားကိုခွက်, ဒါ့အပြင်ဆောင်းတွင်းလအတွင်းနွေးထွေးသောသင်၏နားသည်စောင့်ရှောက်သော.
တစ်ခုချင်းစီကိုခွက်ကိုတစ်ဦးရတဲ့အရာတွေပလပ်စတစ်အပြင်ပန်းရှိပါတယ်, ဖွယ်ရှိအတော်လေးအလွယ်တကူအမှတ်အသားများကိုပြသလိမ့်မည်သည့်, သိသာသူတို့ကိုငါစမ်းသပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ရေတိုကာလ၌ခြစ်တက်ကောက်နေ.
သူတို့ကတစ်ဦးအတော်လေးသေးငယ်တဲ့အထုပ်သို့တက်ခေါက်, တစ်အိတ်သို့ပစ်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အခြား-bits နှင့်အပိုင်းပိုင်းဖမ်းမိဖို့မဖြစ်နိုင်သော.
လက်ျာလက်ကိုနားထောငျခွက်ကိုပါဝါခလုတ်ကိုရှိပါတယ်, နားကြပ်ဆိပ်ကမ်းနှင့်ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု, အ Philips ကလိုဂိုကိုဖြတ်ပြီးပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့် activated. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
လက်ျာလက်ကိုနားထောငျခွက်ကိုထိထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ်, ထိုတွင်တွေ့ရှိသောသူတို့အားအလားတူ Zik ကြက်တူရွေး နားကြပ်၏လိုင်း. တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းကိုထိပုတ်ပါဂီတကစားသို့မဟုတ် pauses, ထပွတ်ဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်ဆင်းအသံအတိုးအကျယ်ညှိ, လက်ဝဲသို့မဟုတ်လက်ျာခုန်ကျော်ခြင်းများပုဒ်ပွတ်ဆွဲနေစဉ်. အပုဒ်ကျော်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါကြောင့်တစ်နည်းနည်းနှေးနှေးပင်လျှင်အသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိပါဘူးအဖြစ်, ဒါပေမဲ့ taping သို​​့မဟုတ်ဂီတခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုမှထိစိတ်မချရဖြစ်ပါတယ်, မကောင်းတစ်ဦးကိုကြည့်ပါ - သင်မကြာခဏထပ်တလဲလဲအများပြည်သူထဲမှာနားအပေါ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရိုက်တက်အဆုံးသတ်အဓိပ်ပာယျ.
အခြားခလုတ် on-ပယ်ခလုတ်ကိုပါဝင်, နှင့်လည်းကောင်းတပယ်ဖျက်ဆူညံသံကိုသက်ဝင်ခြင်းသို့မဟုတ်နားကြပ်သို့ပုလွေနောက်ခံဆူညံသံကြေညာချက်ထွက်သည်ကိုနားထောငျသို့မဟုတ်လူတို့အားပြောဆိုရန်တစ် mode ကိုအပေါ်အကူးအပြောင်း. သို့မဟုတ်ပိတ် Bluetooth ကိုဖွင့်ဖို့ခလုတ်တစ်ခုနှင့်ကြိုးနားထောင်ခြင်းများအတွက်စံနားကြပ်ဆိပ်ကမ်းလည်းရှိပါတယ်.
သူတို့ကိုချိတ်တွဲတာဆို Android စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူလက်ဝဲနားကိုခွက်ကိုအပေါ်တကိုထိပုတ်ပါအတူ NFC ကို အသုံးပြု. လွယ်ကူသည်. အခြားသူများကကို manually Bluetooth ကိုခလုတ်ချကိုင်ဆောင်ခြင်းဖြင့်တွဲဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်.
ထိုအိတ်ကပ်ထဲမှာဖုန်းအဘလူးတုဆက်သွယ်မှုအခြား devices များထံမှမဆိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲတည်ငြိမ်သောခဲ့သည်, ထိုကဲ့သို့သောစမတ်နာရီသို့မဟုတ်ကြံ့ခိုင်ရေးတီးဝိုင်းအဖြစ်. အဆိုပါနားကြပ်တခါမှာနှစ်ဦး devices တွေကိုမှဆက်သွယ်နိုင်သည်, သင်တစ်ဦးတက်ဘလက်နှင့်စမတ်ဖုန်းရှိပါကနေရာလေးကိုသောဖြစ်ပါသည်, နှင့်သဟဇာတ devices များနှင့်အတူမြင့်မားအရည်အသွေးဆက်သွယ်မှုများအတွက် aptX နှင့် AAC ထောကျပံ့.
ငါသတိထားမိတစ်ခုမှာထူးဆန်းတဲ့အရာသူတို့ရံဖန်ရံခါမျှသိသာအကြောင်းပြချက်များအတွက်သီချင်းအလယ်၌ဂီတခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုမယ်လို့ဖြစ်ပါသည်. ကိုယ်ကသာတစ်ကြိမ်ငါးအယ်လ်ဘမ်သို့မဟုတ်ဒီတော့ဖြစ်ပျက်မယ်လို့, ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာခွဲထုတ်နိုင်ဘဲ.
အဆိုပါဆူညံသံပယ်ဖျက်နောက်ခံမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပိတ်ဆို့ခြင်းမှာကောင်းလှ၏, မိုဘိုင်းဖုန်းအားလုံးပိုပြီးသိသာနေတဲ့စပီကာနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောအခါနေသူများကဖန်တီးသောအလားတူလျှပ်စစ်ဆူညံသံအောင်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါနားကြပ်လျောက်ပတ်သောအသံ, အလွန်အမင်းလွှမ်းမိုးဘေ့မပါဘဲကောင်းတစ်ဦးချိန်ခွင်လျှာနှင့်အတူ. မိုဃ်းချုန်းတော်မူ၏ thumps ရှာနေသူများသည်အခြားနေရာများတွင်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည်လိမ့်မည်. သူတို့ကကောင်းကောင်းတစ်ဦးချင်းစီတူရိယာထွက်ကောက်ယူ, ဒါပေမယ့်ရံဖန်ရံခါအလယ်မှာပ္ပံအတွက်နည်းနည်းရွှံ့တံပိုးမှုတ်သောအခါ. podcasts တွေကိုအပေါ်အသံတွေကိုငါချင်ပါတယ်သကဲ့သို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်ကြ. အရည်အသွေးပယ်ဖျက်ဆူညံသံနှင့်အတူအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်, ဂီတအနည်းငယ်ပိုလုံ့လရှိသူအသံအောင်.
အဆိုပါဆူညံသံပယ်ဖျက်နောက်ခံ hums နှင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များထွက်ပိတ်ဆို့ခြင်းမှာထိရောက်သောခဲ့သည်. သို့သော်ထိုသို့သောအသံကဲ့သို့သောအခြားအသံများကိုထုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းမှာအထူးသဖြင့်ကောင်းသောမဟုတ်ခဲ့, နှင့်ဂီတကစားမပါဘဲသူတို့ဆန်တဲ့ခဲ့သည်.
အများဆုံးနှောင့်အယှက် bit နဲ့ background မှာတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်လျှပ်စစ်ညည်းသံခဲ့သည်, ဂီတကစားအတူအလွန်အမင်းကွားနိုငျမဟုတ်ခဲ့သည့်, ဒါပေမဲ့ခဲ့သည်ဂီတရပ်ထားခဲ့သည်သို့မဟုတ်ဆိတ်ငြိမ်အပိုင်းစဉ်အတွင်းအခါ,. mobile phone က signal ကိုတစ်ဦးစပီကာနှောင့်ယှက်တဲ့အခါချိတ်ဆက်နေတဲ့ဘလူးတုသ်အရင်းအမြစ်နှင့်အတူအများဆုံးပျံ့နှံ့ဖြစ်ပုံနှင့်နေသူများကဖန်တီးသောအသံနှင့်ဆင်တူတံပိုးမှုတ်သောအခါ.
အ earcup အတွင်းစပီကာကိုဖုံးသောကွက်၏အောက်ခြေတွင်အခက်ခဲပလပ်စတစ်စိမ်းတချို့နှောငျ့ယှကျသငျသညျစေခြင်းငှါ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါနားကြပ်ကောင်းစွာ fit, အလင်းခံစားရပေမယ့်သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုအပေါ် secure နှင့်တိုးချဲ့နားထောင်ခြင်းသည်အသက်သာရှိပါတယ်, သင်၏နားကိုအနည်းငယ်ထုတ်ကပ်မဟုတ်လျှင်. သူတို့ကအသီးအသီးနားကိုဖလား၌အပီဖုံးထည်အတွင်းတစ်ခက်ပလပ်စတစ်စတုရန်းရှိ. ငါ့နားကသူတို့ကိုဆန့်ကျင်ငြိမ်ဝပ်စွာနေနှင့်တစ်ဦးအနေဖြင့်အပြီးမသက်မသာဖြစ်လာခဲ့သည်. သူတို့အပျေါမှာကြိုးစားခဲ့သူကိုအခြားသူများကအတူတူပင်ပြဿနာမခံစားခဲ့, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့နားပျဉ်းထွက်ကပ်ဘယ်လောက်မူတည်. ငါငါ့ဥစ္စာကိုအလွန်ဝေးထွက်ဝဲသတိထားမဟုတ်ခဲ့, အချို့သောအခြားသူများထက်ဒါပေမဲ့သိသာပိုပြီး.
ဘက်ထရီသက်တမ်းမြတ်သောခဲ့သည်, ပတ်ပတ်လည်တည်တံ့ 15 စွဲချက်အကြားနာရီ. အပေါ်ပယ်ဖျက်မြည်သံနှင့်အတူခရီးသည်များ၏တစ်ပါတ်ရဲ့တန်ဖိုးရှိရှင်သန်အလွယ်တကူလုံလောက်. အားသွင်းအ headband လက်မောင်းကိုအောက်မှာနားကြပ်၏ထိပ်ပေါ်မှာဝှက်ထားလျက်ရှိသော microUSB port ကိုသုံးပြီးမယ့်တစ်နာရီကျော်ယူ.
အဆိုပါ microsUSB port ကို headband ဖို့ earcup ဆက်သွယ်ထားသောလက်မောင်းကိုနောက်ကွယ်မှဝှက်ထားလျက်ရှိ၏, သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကြည့်ရာ, ဒါပေမဲ့သူတို့စွဲချက်တင်ခံရပါတယ်နေချိန်မှာသူတို့ကိုသင်ဝတ်ဆင်မပေးနိုငျခွငျးကိုဆိုလို. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Philips က SHB9850NCs £ 130 များအတွက်ရရှိနိုင်ပါ. နှိုင်းယှဉ်သည် ဖြစ်. Plantronics နောက်ခံ beats တွေကို Pro ကို £ 190 ကုန်ကျနှင့် Zik ကြက်တူရွေး 2.0 £ 300 ကုန်ကျ. Wired ဆူညံသံ-ပယ်ဖျက်နားကြပ်ပတ်ပတ်လည်£ 100 ခန့်မှာစတင်.
အဆိုပါဆူညံသံပယ်ဖျက်ကောင်းလှ၏, ထိုမထိုက်မတန်နှင့်အလေးချိန်မြတ်သောဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းအစိုင်အခဲသည်. တကယ်နားကြပ်ကိုချစေ niggles ့စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်, အမည်ရအလွန်နာကျင်ကျိန်းစပ်လျှပ်စစ်ညည်းသံ, finickity ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နားခွက်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ခဲယဉ်းဖု, သော may သို့မဟုတ်သင်တို့အဘို့အပြဿနာတစ်ခုမဖြစ်စေခြင်းငှါ.
အကောင်းအဆိုး: အလင်း, ကျစ်လစ်သော, ကောင်းသောနောက်ခံ hum ပယ်ဖျက်, အစိုင်အခဲကို Bluetooth ချိတ်ဆက်မှုကိုနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်း
Cons: နှောင့်အယှက်လျှပ်စစ်ညည်းသံ, ထိုနားကြပ်အတွက်ခက်ခဲဖု, passive သံကိုအထီးကျန်ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်, သူတို့ဖြစ်သင့်သကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ထိန်းချုပ်မှု
အဆိုပါ headband အလင်းနှင့်သက်သာဖြစ် padding ကိုအများကြီးမလိုဘဲဦးခေါင်းကိုကျော်ကောင်းစွာကိုက်ညီ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ကေဘယ်ကြိုးတွေအခမဲ့ချိုးဖျက်ဖို့အကောင်းဆုံးကို Bluetooth နားကြပ်ငါးခု
← ပုံမှန်လူသားတွေဟာများအတွက်ဒီဇိုင်းနယူးအင်္ဂါဂြိုဟ်မြေပုံ 14 Times သတင်းစာက Google တကယ်တော့တစ်စုံတစ်ယောက်ကရဲ့ဘဝကကယျတငျ [Ranker] →